Shiinaha - BBC News Somali
Posted at 16:30 23 Sebtembar 202116:30 23 Sebtembar 2021
Dhismo aan caadi ahayn oo dhulka hoostiisa ah ayaa weli ka socda lamadegaanka ee ku yaalla galbeedka Shiinaha.
Posted at 13:04 22 Sebtembar 202113:04 22 Sebtembar 2021
Posted at 10:07 20 Sebtembar 202110:07 20 Sebtembar 2021
Janaraal cabsi ka qabay inuu Trump amro weerar niyukliyeer oo ka dhan ah Shiinaha
Wicitaanka "ina dhexmaray bishii October iyo January ayaa looga gollahaa in cabsida looga saaro militariga Shiinaha", sida uu Arbacadii sheegay Milley.
Posted at 12:03 2 Sebtembar 202112:03 2 Sebtembar 2021
Xubno ka tirsan kooxda qabaa'il ayaa sheegay inay ka baqayaan in la wareegidda ay Taliban awoodda la wareegtay ay sababi doonto in Shiinaha uu ugu yimaado Afghanistan.
Posted at 10:50 19 Agoosto 202110:50 19 Agoosto 2021
Afar dal oo ka faa'idaya "Jabka" reer Galbeedka ee Afghanistan
Xilli Mareykanka iyo dalal badan oo reer galbeed ah ay u kala cararayaan sidii ay muwaadiniintooda uga saari lahaayeen Afghanistan, waxaa haddana jira dalal aan ka walwalsaneyn sii wadidda xiriirka ay la leyihiin hogaamiyayaasha cusub ee Taalibaan.
Posted at 10:22 6 Agoosto 202110:22 6 Agoosto 2021
Diyaaradda dagaal ee jiilka lixaad oo ay ku loollamayaan Mareyknaka iyo Shiinaha
Mareykanka iyo Shiinaha waxaa ka dhex billaabmay tartan ay ugu jiraan iney ku sameystaan diyaaradaha dagaalka ee jiilka lixaad ee noqon doono kuwa dunida ugu casrisan.
Posted at 17:52 30 Luulyo 202117:52 30 Luulyo 2021
Shiinaha ayaa uga digay raxanta marakiibta dagaalka ee Ingiriiska ee Carrier Strike Group ee uu hor kacayo midka diyaaradaha qaada ee lagu magacaabo HMS Queen Elizabeth aanay ku dhaqaaqin "falal aan haboonayn" marka ay galaan badda lagu muransan yahay ee South China Sea.
Posted at 3:20 29 Luulyo 20213:20 29 Luulyo 2021
Saynisyahannadu waxay sheegeen Shiinaha inuu dhisanayo xaruumo cusub uu Niyukilarka ku sameysto isla-markaana ku keydsado iyo xaruumo gantaallada laga diro.
Posted at 18:41 15 Luulyo 202118:41 15 Luulyo 2021
Sida dhalinyaro badan ay isku da' yihiin, gabadha lagu magacaabo Ruxin oo 23 sano jir ah oo ku nool Shiinaha waxay maalin kasta isha ku haysaa baraha bulshada si ay ula socoto wararka ku saabsan qallinka wejiga ee is qurxinta.
Posted at 4:48 5 Luulyo 20214:48 5 Luulyo 2021
Muxuu yahay gantaalka uu haysta Shiinaha ee ka cabsiiyey Maraykanka?
Mareykanka ayaa sheegay in kordhinta keydka hubka Nukliyeerka ee Shiinaha ay tahay arrin walaac leh
Bog 1 of 18